Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo casho sharaf u sameeyay waaxyaha Garsoorka. – The Voice of Northeastern Kenya
Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo casho sharaf u sameeyay waaxyaha Garsoorka.
Star FM February 8, 2019
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo Xalay magaalada muqdisho casho sharaf ugu sameeyay madaxda garsoorka dalka Soomaaliya, ayaa sheegay in hagaajinta dhaqaalaha dalka, yaraynta musuq-maasuqa, horumarinta dawlad wanaagga, hir-gelinta siyaasad lagu wada qanacsanyahay iyo aaminaadda dunida ay ku xiranyihiin hir-gelinta Garsoor iyo cadaalad loo simanyahay oo dadka Soomaaliyeed ay iimaanka ku qabaan.
Casho Sharaftaan oo ay kasoo qayb galeen guddoomiyaha maxkamadda sare, xeer ilaaliyaha qaranka, garsoorka gobalka Banaadir iyo kuwa maamul gobaleedyada ayaa muhiimaddiisu ahayd dhiirri gelinta, dardar-gelinta qorshaha hagaajinta garsoorka dalka Soomaaliya iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha jira.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa madaxda garsoorka ku ammaanay shir sannadeedka ay qabteen, wuxuuna ku dhiirri geliyay inay joogteeyaan kulamada ay kaga tashanayaan horumainta iyo hagaajinta hannaanka gasoorka dalka.
Xeer ilaaliyaha Guud ee qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir iyo gudoomiyaha Maxkmada Sare Baashe Yuusuf Axmed ayaa dhankooda waxay ra’isulwasaaraha kaga mahad celiyeen casharaftaas uu u sameeyay gabagabada shirka Garsoorka waxayna sheegeen inuu garsoorka Soomaaliya dhinacyo badan hormar ka sameeyay wixii dhimana la sii anba qaadi karo.
Himilooyinka tubta cadaaladda iyo amniga ee dowlada ay doonayso inay ka mira dhaliso ayaa waxaa ku jira halbeegyo muhiim u ah horumarinta cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliya si loo helo caddaalad loo simanyahay oo dhamaan dadka Soomaaliyeed wada gaadha.
Madaxwaynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa shalay soo xiray shir sannadeedkii ugu horreeyay ee kadib burbrkii dowladii dhexe ee Soomaaliya kaasoo waaxyaha Garsoorka Qaranku ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
← Aqalka sare ee Spain oo ansaxiyay mooshin lagu taageerayo hantida Venezuela
Kenya oo aynan saameyn ku yeelan doonin ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub →